ေက်းဇူးေတာ္ | Rev.U Min Lwin
All posts tagged ေက်းဇူးေတာ္
ကျေးဇူးတော် အကြောင်း (၃)
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ေက်းဇူးေတာ္.	1 Comment
ရှင်ယောဟန် ၈း၁၁ တွင်တွေ့ရသည့် “ငါလည်း သင်၏ အမှုကို မစီရင်”ဆိုသည့် အပိုင်းသည် ကျေးဇူးတော်၏ ပထမပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်သည့်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ သွားလော့၊ နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကို မပြုနှင့် ဆိုသည့် အပိုင်း သည် ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားပြီးနောက် ပြန်လည် တုန့်ပြန် ရမည့် အပိုင်း ဖြစ်သည်။
ပြန်လည် တုန့်ပြန်ရမည့်ကျေးဇူးတော် (တိတု ၂း၁၂-၁၃)
ပြစ်မှားသော မိန်းမကို ယေရှုခရစ်တော် ပြောသည့် စကားတွင် နောက်တဖန် ဒုစရိုက်မပြုနှင့် ဟု ပြောဆိုခဲ့ရာ မပြုနှင့်ဆိုသော အပိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကို သွန်သင်နေခြင်း ဖြစ်ရာ ဘုရားတရားမဲ့ နေခြင်း၊ လောကီ တပ်မက်ခြင်း တို့ကို မပြုရန် သွန်သင် နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တပ်မက်ခြင်း များကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ယေရှုခရစ်တော် ဘုန်းတော်ထင် ရှားမည့် အချိန် ကာလ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများကို မျှော်လင့်နေချိန်တွင် မိမိကိုယ်ကို ချုပ်ထိန်းခြင်း၊ ဖြောင့်မက်စွာ အသက်ရှင်ခြင်း၊ ဘုရားဝတ်၌ အသက်ရှင်ခြင်း တို့ဖြင့် ဤဘ၀တွင် အသက်ရှင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် သင်နောက်တဖန် ဒုစရိုက် မပြုနှင့် ဆိုသည့် အပိုင်းဖြစ်သည်။ကျေးဇူးတော် ဆိုသည့် စကားလုံးသည် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ရုံ မျှသာမကဘဲ ဘုရားမဲ့ တရားမဲ့ နေခြင်း၊ လောကီ အညစ် အကြေး တပ်မက်ခြင်း တို့ကို မပြုနှင့် ဟူ၍လည်း သင်ကြား ပေးနေပါသည်။ ထိုစကားလုံးပင် ရှင်ပေါလုက ရောမ ၁း၁၈ တွင် အသုံးပြု ထားသည်မှာ သမ္မာတရားကို အဓမ္မဖြင့် ဆီးတား နှိပ်စက်သော သူတို့ ပြုတတ်သော ဘုရားမဲ့နေခြင်း အမှု၊ တရားကို ကျူးလွန်ခြင်းအမှု၊ အမျိုးမျိုးတို့ တဘက်၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ထင်ရှားလျှက် ရှိ၏။ ရှင်ပေါ်လုက ထပ်မံ၍ လောကီတပ်မက်ခြင်း ဆိုသော စကားလုံးကို ရှင်းလင်းရာ၌
ရောမ ၁း၂၁ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိလျှက်ပင် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီးမွမ်း ကျေးဇူးတော်ကိုလည်း မသိမမှတ် အချည်းနှီး တွေးဆခြင်း၊ သတိမရှိသော စိတ်နှလုံး မိုက်မဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
ရောမ ၁း၂၃ မဖောက်ပြန် မပျက်စီးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ပယ်လျက်၊ ဖောက်ပြန် ပျက်တတ်သော လူ၏ ရုပ်တု၊ သားငှက်၊ အစရှိသော တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်၏ ရုပ်တုတို့ကို ဘုရားသခင် အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။
ရောမ ၁း၂၆ မိန်းမတို့သည် ပကတိ ထုံးစံကို စွန့်၍၊ ပကတိနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ထုံးစံကို လိုက်ကြ၏။
ရောမ ၁း၂၁ ထို့အတူ ယောင်္ကျားတို့သည်လည်း မိန်းမနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ ပကတိ ထုံးစံကို စွန့်၍ အချင်းချင်း ကိလေသာ စိတ်ပူလောင် သဖြင့် ရှက်ကြောက်ဖွယ်သော အမှုကို ယောင်္ကျားချင်း ပြုလျက်၊ မိမိတို့ မှားယွင်းခြင်းနှင့် အလျောက် မိမိတို့ အပြစ်ဒါဏ်ကို ခံရကြ၏။
ဤမျှလောက် ဘုရားသခင် ရွံရှာ စက်ဆုတ်တော် မူသော အမှုအရာကြီးကို အချို့နိုင်ငံများက ဥပဒေ ထုပ်ပြန်ကာ ခွင့်ပြုထားကြသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျေးဇူးတော်က ထိုအရာများကို မပြုနှင့်ဟူ၍ အတိအလင်း သွန်သင်ထားပါသည်။ ခွင့်မပြုတာ ဖြစ်နိုင်တယ် ဟူ၍လည်း မပြောပါ။ အခုတော့ လုပ်ပါ။ နောက်ပိုင်း ကျရင် မလုပ်နဲ့ဟူ၍လည်းမပြောပါ။ အတိအကျ ပြောထားသည် မှာ နောက်တဖန် ဒုစရိုက် မပြုနှင့်။ ထိုမပြုနှင့် ဆိုသော စကားလုံးသည် ပြက်သားပါသည်။ ထပ်မံစဉ်းစား ကြည့်ပါ။ သင့်ကို စာတန်က မင်းနဲ့ငါ ခဏလောက် တွဲကလို့ ရမလား၊ ခဏလေးပါ၊ တကယ်ကို ခဏလေးပါ၊ (တစ်မိနစ် လောက်လေးပါ) ဟုပြောလာလျှင် သင်၏အဖြေက အားနာပြီး ဟုတ်ကဲ့ ဟုပြောလျှင် သင်သည် စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှု အောက်က မလွတ်သေးဘူး ဆိုတာ သိသာပါသည်။ သို့သော် သင်က ပြက်သားစွာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ငါအဲဒီလို မလုပ်နိုင်ဘူး ဟူ၍ ပြက်သားစွာ ငြင်းဆိုခဲ့ပါက သင်သည် စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှု နှင့် လွတ်ကင်းပြီး ဘုရားသခင် ဘက်တွင် အပြည့်အ၀ ရပ်တည်နေကြောင်း သိသာ ထင်ရှားပေသည်။ အားနာခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မပျက်ပြားစေပါနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကို ကြိုက်နှစ်သက် ကြပါသည်။ ထိုကျေးဇူးတော်၏ နောက်က အပိုင်းကို ကြောက်ကြပါသည်။ ကျေးဇူးတော်တွင် ဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်နှင့် တန်ဘိုးကြီးသော ကျေးဇူတော် နှစ်ခုအကြောင်းကို ပြောလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် ရွှေ၊ ငွေ အစရှိသော မြင်နိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသာ သင်မျက်စိထဲမှာ မြင်နေလျှင် ဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်ကိုသာ သင်မျှော်လင့် နေသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ ဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်လွတ်ခြင်း တရားလောက်သာ ဟောသည်။ နောင်တရဘို့ မတောင်းဆိုပါ။ အသင်းတော် စည်းကမ်းတွေ မပြောပါ။ ပွဲတော်မင်္ဂလာ အကြောင်း မပြောပါ။ နှစ်ခြင်း အကြောင်းလည်း မပြောပါ။ ၀န်ချ တောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းလည်း မပြောပါ။ ဆုတောင်းဘို့လည်း မတိုက်တွန်းပါ။ နှုတ်ခပတ်တော်နဲ့ အသက်ရှင်ဘို့လည်း မတောင်းဆိုပါ။ ထိုဈေးပေါသော ကျေးဇူးတော်ကတော့ တပည့်တော် ဖြစ်စေခြင်းလည်း မရှိ။ ကားတိုင်လည်း မရှိ။ ယေရှုခရစ်တော်လည်း မရှိ။ ၀ိညာဉ်တော် တန်ခိုးကိုလည်း နားမလည်။ ခရစ်တော်၏ အသက်ရှင်မှုတွေလည်း မသိ….. အစရှိသည် တို့ဖြစ်သည်။
တန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးတော်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ယေရှုခရစ်တော်၏ နောက်လိုက် ဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ထိုသူ၏ အသက်တန်ဘိုးကို ပေးချေပြီးသား ဖြစ်သည်ကို နားလည် သွားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကျေးဇူးတော်သည် သူ့ကို မှန်သော အသက်ကို ရရှိစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဘိုးကြီးသော ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရရန် အပြစ်ကို စီရင်ပြီး အပြစ်သားကို ဖြောင့်မက်သူ ဖြစ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် တန်ဘိုးကြီးပါသည်။ ထိုတန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးတော်ကို လူသားများ ခံစားရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ တစ်ဦးတည်းသော သားကို စွန့်လွှတ် ရသောကြောင့် တန်ဘိုး ကြီးပါသည်။ ယေရှု ခရစ်တော်က အသက်နှင့် ရင်းပြီး ပေးဆပ် ရသောကြောင့် တန်ဘိုးရှိပါသည်။ သို့သော် ကောင်းကင်သို့ ပြန်လည် ထမြောက်စေခဲ့ပါသည်။ ယေရှု ခရစ်တော်သည် ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါလျှက် လူဇာတိ ခံယူရသောကြောင့် တန်ဘိုးများစွာ ပေးဆပ်ရသည်။ ထိုကြောင့် တန်ဘိုး အလွန်ကြီးပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောကြားလိုသည်မှာ သင်ရယူခံစားသော ကျေးဇူးတော်သည် အပေါစား ကျေးဇူးတော်လား၊ တန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးတော်လား။ သေချာစွာ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး လေ့လာပါ။ အကယ်၍ တန်ဘိုးရှိသောကျေးဇူးတော်ကို သင်ရယူ ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသေးဘူး ဆိုလျှင် အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါသည်။ သင်တို့ အသက်တာထဲမှာ တန်ဘိုးရှိသော ကျေးဇူးမင်္ဂလာများ ရယူပိုင်ဆိုင် ပါစေဟု ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
ကျေးဇူးတော် ခံစားရတဲ့ မေဖိဗောရှက်
ဓမ္မသစ်မှ အကြောင်းအရာ တစ်ခုနှင့် ဓမ္မဟောင်းမှ ပုံပမာ အကြောင်းအရာ တခုစီကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ထပ်မံလေ့လာကြပါစို့။ ဓမ္မရာဇ၀င် ဒုတိယစောင် အခန်းကြီး (၉)ရှိ မေဖိဘောရှက်၏ ဇတ်လမ်းသည်ကျေးဇူးတော်အကြောင်းကို လေ့လာရန် အလှပဆုံးသော အကြောင်း အရာ ဖြစ်သည်။ ရှင်ဘုရင် ရှောလုသည် စစ်ပွဲတွင် သေးဆုံးသွားသည်။ သူ၏သားဖြစ်သူ ယောနသန် လည်း ထိုစစ်ပွဲတွင် သေဆုံးသွားသည်။ ထိုအခါဒါဝိတ်သည် ရှင်ဘုရင် ဖြစ်လာသည်။ သူသည် ရှင်ဘုရင် ဖြစ်လာသောအခါ “ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ငါကျေးဇူးပြုစရာ အခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ ရှောလု၏ အဆွေအမျိုး တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မရှိသလော။” (၂ရာ ၉း၃)။ ဟုမေးမြန်းပြီး ရှာဖွေခဲ့ရာယောနသန် ၏သား မသန်မစွမ်း ဖြစ်နေသူ မေဖိဘောရှက် ကိုတွေ့လေသည်။ သူနေထိုင်သော နေရာကို မေးမြန်ရာဒေလောဗာရွာ တွင် နေထိုင်ကြောင်း သိရှိရလေသည်။ ဒေလောဗာ ဟူသော အမည်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ စကားလုံး မရှိ၊ ပစ္စည်းမရှိ၊ နေစရာမရှိ ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ မေဘိဘောရှက်တွင် ဘာဆို ဘာမျှ မရှိပါ။ သို့သော်လည်းမေဘိဗောရှက်ကို ဒါဝိတ်က ပြောသည်မှာ” မကြောက်ပါနဲ့၊ မင်းအဖေ ယောနသန်အတွက် ငါကျေးဇူးပြုမည်” ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။” မင်းအဖေ၊ မင်းအဘိုးရဲ့ မြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ငါပြန်ပေးမယ်။ မင်းလည်း ငါနဲ့အတူ ငါ့စားပွဲ မှာ ထိုင်ရလိမ့်မယ်” ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ မေဖိဗောရှက် ပြန်လည် တုန့်ပြန်ခဲ့သည်မှာ “ကျွန်တော်ကဲ့သို့သော ခွေးသေကောင်ကို ကိုယ်တော် ကြည့်ရှုရမည့် အကြောင်း ကိုယ်တော်ကျွန်သည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်ပါသနည်း” ဟူ၍ ပြန်လျှောက်ခဲ့သည်။ ထိုစားပွဲတွင် ထိုင်နေမည့် မေဖိဗောရှက်ကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။ ထိုနေရာတွင် ညဏ်ပညာ အလွန်ကြီးသည့် ရှောလမုန်လည်း ထိုင်နေလိမ့်မည့်။ ရှောလမုန်က ညဏ်ပညာနှင့် ဆိုင်သော စာပေတွေကို ရေးသားသည့် အတွေ့အကြုံတွေ ပြောနေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် အချစ်သီချင်းတွေ ရေးစပ်နေလိမ့်မည်။ ထိုသီချင်းများကို ညစာစားပွဲတွင် ဆိုပြကောင်း ဆိုပြနိုင်သည်။ ထိုစားပွဲတွင် အလွန်လှပသည့် အဗရှလုံလည်း မကြာခဏ လာရောက်ထိုင်ပေလိမ့်မည်။ အဗရှလုံသည် တမျိုးသားလုံးတွင် အလှဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းစာက ဖော်ပြပါသည်။ ထိုနေရာတွင် ဒါဝိတ်၏ သမီး အလွန်လှပသည့် တာမာ မင်းသမီးလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသော ညစာ စားပွဲဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သူသည် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် အတွေးပေါင်း မြောက်မြားစွာကို တွေးနေလိမ့်မည်။ ငါဒီနေရာကို ဘာကြောင့် ရောက်လာတာလဲ။ ရှောလမုန် လို ညဏ်ပညာလဲမရှိ။ အဗရှလုံလို ကြည့်လို့လည်း မကောင်း၊ တာမာလို ချောမောသူလဲမဟုတ်။ သည့်အပြင် ရှောလုသည် ဒါဝိတ်၏ ရန်သူတော် တဦးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော နေရာသို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ရောက်ခွင့်ရသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ရှင်ဘုရင် ကိုယ်တိုင်က ဘိတ်ခေါ် ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ “သင်သည် နေတိုင်းအစဉ် ငါ့စားပွဲ၌ စားရမည်။”
ဒေလောဗာ ဆိုသော နေရာသည် အမြဲတမ်း နေရမည့် နေရာမဟုတ်။ ထိုနေရာသည် စောင့်ဆိုင်းရသော နေရာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ မေဘိဘောရှက်သည် ထိုနေရာတွင် စောင့်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ယခုအချိန်၌ သင်သည် ဒေလောဗာမှာ စောင့်ဆိုင်းနေသူ တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်မည်မျှ ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်း နိုင်ပါသနည်း။ သင် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည် ဆိုသည်ကို ရှင်ဘုရင် သိနေသည် ဆိုသည်ကို သတိ ရပါ။ ဒေလောဗာ ရွာ၌ပင် ကျေးဇူးတော် ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျေးဇူးတော်ကို သွန်းလောင်း ရန် အဆင်သင့် ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော်သည် မေဖိဗောရှက်၏ ဇတ်လမ်းလေးကို အလွန်ကြိုက် နှစ်သက် ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ပင် ထိုမေဘိဘောရှက်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်တရားသည် ကျွန်တော်တို့ကို မသန်မစွမ်း ဖြစ်စေသည်။ နှုတ်ကို မသန်မစွမ်း ဖြစ်စေသည် ။ ကျွန်တော်တို့ ပြောချင်သည့် အမှန်တရားကို ပြော၍မရ။ မပြောချင်သည့် မုသာစကား တွေကို ပြောနေရသည်။ စိတ်အာရုံကို မသန်မစွမ်း ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မှားယွင်သော အကြောင်း တရား များ၏ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် အရာရာကို လုပ်ဆောင် နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင် လိုသည့် အတိုင်း လုပ်ခွင့်မရ။ အပြစ်တရား၏ ဦးဆောင်မှု အောက်တွင် လုပ်ဆောင် နေကြသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့၏ ဘုရားသခင် ရှင်ဘုရင်က ကျွန်တော်တို့ထံလာ၍ ငါ၏ စားပွဲတွင် စားပါ ဟူ၍ ပြောလာသည်။ တစ်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့သည် ရှင်ဘုရင်၏ စားပွဲတွင် ထိုင်၍ ထိုဘုရင်နှင့်အတူ စားသောက်ခွင့် ရပေဦးမည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မသန်မစွမ်း ဖြစ်နေသော အစိတ် အပိုင်းများ အားလုံး အကောင်း ပကတိ ဖြစ်လာဦးမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ထိုဘုရားသခင်သည် အရာ ခပ်သိမ်းကို ပြန်လည် အသစ်ပြုပြင် ဖန်ဆင်းဦးမည် ဖြစ်သည်။
ပြစ်မှားတဲ့ မိန်းမလဲ ကျေးဇူးတော် ခံစားရ
နောက်ထပ် အခြား ဥပမာ တခုကို ဓမ္မသစ် ကျမ်းမှ ထပ်မံ ပြပါဦးမည်။ သင် သိကောင်း သိနိုင် ပါသည်။ ရှင်ယောဟန် ၈း ၁-၁၁ တွင် မှားယွင်သော အမှုကို ပြုသော မိန်းမ တစ်ယောက် အကြောင်း တွေ့ရ ပါသည်။ ကျမ်းတတ် ဆရာများ နှင့် ဖာရိရှဲ များက ထိုမိန်းမကို ခေါ်ဆောင် လာသည်။ ယေရှု ဗိမ္မာန်တော်တွင် ရှိနေချိန်တွင် ထိုအဖြစ် အပြက် ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့က “ဆရာ ဒီမိန်းမ မှားယွင်းခြင်း အမှုကို ပြုနေစဉ် ဖမ်းမိပါတယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာတော့ ခဲနဲ့ပေါက်သတ်ရမယ်လို့ ပြောထား ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာ ဘယ်လို ပြောမလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်” စသည်ဖြင့် မေးမြန်းလေသည်။ သူတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပညတ်တော်က စေခိုင်း ပြောဆိုသည့် အတိုင်း လုပ်ဆောင် လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် မပါချေ။ ယေရှုကို ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းသည့် သဘောဖြင့် လာရောက် ပြောဆိုခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ရှင်ယောဟန်က “ကိုယ်တော်ကို အပြစ်တင်ခွင့် ရှိစေခြင်းငှါ စုံစမ်း နှောင့်ယှက်သော သဘောဖြင့် မေးမြန်းကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် မည်သို့မျှ အကြောင်းမပြန်သောအခါ အထပ်ထပ် မေးလျှောက်သဖြင့် ခရစ်တော်က ပြန်လည် ဖြေကြားရာတွင် “အပြစ်ကင်းသောသူက ရှေးဦးစွာ ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်ပါ” ဟု ပြောလိုက်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် သိပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အရှည် မပြောလိုတော့ပါ။ အကြီးဆုံးမှ အငယ်ဆုံး ထိတိုင်အောင် အပြစ်နှင့် မကင်းကြသဖြင့် ခဲနှင့်ပေါက် သတ်ဘို့ ကိစ္စ ပြီးပြက်သွားတော့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ထိုအမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တည်းသာ ကျန်တော့သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကို သေသေချာချာ မြင်အောင် ကြည်လိုက်ပါ။ ယေရှုက အမျိုးသမီးကို ကြည့်ရှုလျှက် ‘မင်းကို စီရင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးလား’ ဟု အပြုံးမျက်နှာနှင့် မေးလိုက်သည်။ ထိုအချိန်၌ ထိုမိန်မ ကိုယ်တိုင်ကပင် မျက်စိ မှိတ်ထားလျှက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မကြည့်ရဲ လောက်အောင် ကြောက်ရွံ့ နေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော အသက် သေဆုံးရမည့် အန္တရယ် ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းမက မော့ကြည့်လိုက်လျှင် တစ်ယောက်မျှ မရှိတော့ချေ။ မျက်စိ မှိတ်ထားချိန်တွင် စိတ်ကြီးဝင် ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီး နေသောသူများ၏ ပါစပ်က ထွက်သော စကားလုံးများဖြင့် ပြောဆိုသွားသော စကားများကို ကြားနေခဲ့ရသည်။ ထိုမိန်းမသည် အမှန်တကယ် ကျောက်တုံးနှင့် အပေါက်မခံရသော်လည်း ပါစပ်ကျောက်တုံးများဖြင့် ပေါက်ခံရကာ စိတ်နှလုံးတွင် နာကျင်စွာ ခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုမိန်းမသည် နောက်ဆုံးတွင် ခရစ်တော်နှင့် နှစ်ယောက်တည်း တွေ့ချိန်၌ သူ့ကို အပြင်အထန် အပြစ်တင် ကြိမ်းမောင်း လိမ့်မည် ဟု တွေးနေမိသည်။ သို့သော် သူမ မျှော်လင့်မထားသော စကားကို ကြားလိုက်ရသည်။ ထိုစကားမှာ “ငါလည်း သင်၏ အမှုကို မစီရင်၊ သွားလော့၊ နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကို မပြုနှင့်”
ကျေးဇူးတော်ဟာ ပြန်လည် တုန့်ပြန်ဘို့လို
အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်ကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ကျမ်းတတ်ဆရာများတွင် ကျေးဇူးတော်မရှိ၊ ဖာရိရှဲများတွင်ကျေးဇူးတော်မရှိ။ ယေရှုခရစ်တော်၌သာ ကျေးဇူးတော်ရှိကြောင်း တွေ့နိုင်ပေသည်။ John Newton ဆိုသူက ရေးသားထား၌ “ကျေးဇူးတော်က ကျွန်တော်ရဲ့ နှလုံးသားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း ဆိုတဲ့အရာတခု သွန်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျေးဇူးတော်ကဘဲ ကျွန်တော်ရဲ့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကိုလည်း သက်သာစေခဲ့ပါတယ်” ဟု ရေးသားခဲ့လေသည်။ အဲဒီကျေးဇူးတော်ဟာ အလွန် တန်ဘိုးကြီး အဖိုးထိုက်တန်ကြောင်း ယခု သိလောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
“ငါလည်း သင်၏ အမှုကို မစီရင်”ဆိုသည့် အပိုင်းသည် ကျေးဇူးတော်၏ ပထမပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်သည့်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ သွားလော့၊ နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကို မပြုနှင့် ဆိုသည့် အပိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားပြီးနောက် ပြန်လည် တုန့်ပြန် ရမည့်အပိုင်း ဖြစ်သည်။
တိတုသည် ကရေတေကျွန်းမှ ဘုရားသခင်၏ လူစုတော်ကို ကြည့်ရှုရသော အသက် ငယ်ရွယ်သူ သင်းအုပ်ဆရာတဦး ဖြစ်သည်။ ထိုအသင်းတော်သည် တမန်တော် ၀တ္ထုထဲတွင် ရှင်ပေါလုပြောသည့် အသင်းတော်ကို တည်ထောင်ပြီး မကြာခင်တွင် တိတုထံ အပ်နှံခဲ့ပုံရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော တိတုသည် ငယ်ရွယ်၍ အတွေ့အကြုံနုနယ်သော သူဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက သူ့ထံသို့ သိသင့်သိထိုက် သည့်အရာများကို သြ၀ါဒ စာစောင်အဖြစ် ရေးသားခဲ့သည်။ ပေါလုသည် သူ၏ စာစောင်ထဲတွင် မစုံလင် မပြီးပြတ်သေးသော အမှုများကို ပြင်ဆင်ပြီး သင်အုပ်ဆရာများကို ခန့်ထားရန် သွန်သင်ထားသည်(တိတု ၁း၅)။ အလားတူပင် မှန်ကန်သော သြ၀ါဒများကို သွန်သင်ရန်လည်း ထပ်မံပြောကြားထားသည်(တိတု ၂း၁)။ ထို့နောက် တိတု ၂း၁၁-၁၄ တွင် ရှည်လျားသော ၀ါကျစာကြောင်းကြီးကို ရေးသားကာ တိတုအတွက် သတင်းကာင်း (Gospel) ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ကရေတေကျွန်း အသင်းတော်တွင် ရှိသော ပြဿနာကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ အသင်းတော်များတွင် ပြဿနာများ ရှိသောကြောင့် ထိုစာပိုဒ်သည် ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဆီလျော်မှုရှိပေသည်။ ထိုနေရာတွင် သင်အုပ်ဆရာ မခန့်နိုင်သေးကြောင်း တွေ့ရသည်။ အသစ်ပြောင်းလဲလာသူထဲတွင် သင်အုပ်ဆရာနေရာ အတွက် သင့်တော်သော လူတစ်စုံတစ်ယောက် မတွေ့သေးသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ပညာရှင် တစ်ယောက် ရေးသားထား သည်မှာ ထိုနေရာတွင် အသင်းတော် လုပ်ငန်းများကို အေးဆေးစွာနေနိုင်သူ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ရိုသေလေးစားမှုခံရသော အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အသင်းတော် လုပ်ငန်း စတင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိပုံမရပါ ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။ သတင်းကောင်းသည် မသေချာ မရေရာသောသူ အများစုအတွက် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်များက လူအပေါင်းထံသို့ ကယ်တင်ခြင်း ကောင်းကြီးများ ယူဆောင်လာ ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ဖြင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဧဖက် ၂း၈-၉ တွင်”ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏၊ ကိုယ်အလိုအလျောက် ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ၀ါကြွားစရာ မရှိ။” ဟု ရေးသားထားပါသည်။ Calvin Miller ရေးသားထားသော Spirit, Word and Story စာအုပ် ထဲတွင် ကျေးဇူးတော်ကို အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရာတွင် “မထိုက်တန်ဘဲ မျက်နှာသာ ပေးခံရသည်” ဟု ရေးသားထားပါသည်။ ကျွန်တော် တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အသက်ရှင်နေ ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ယနေ့ ဤနေရာတွင် ရှိနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်း ခံရပြီ၊ ထာဝရ စီရင်ခြင်းနှင့် လွတ်မြောက်ခွင့် ရသည်။ သို့သော် စဉ်းစားစရာ ရှိလာသည်မှာ ထိုကျေးဇူးတော်သည် ကျွန်တော်တို့ထံ မည်ကဲ့သို့ ရောက်ရှိ လာပါသနည်း။ ၂တိ ၂း၁၄ က ပြောသည်မှာ “ထိုသခင် ယေရှုခရစ်သည် ခပ်သိမ်းသော ဒုစရိုက်မှ ငါတို့ကို ရွေးနှုတ်ခြင်းငှါ လည်းကောင်း၊ ကောင်းသော အကျင့်ဘက်၌ စိတ်အားကြီး၍ ပိုင်ထိုက်တော်မူသော အမျိုးကို မိမိအဖို့ စင်ကြယ်စေခြင်းငှါ လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် စွန့်ကြဲတော်မူပြီ။”
John Bunyan ကရေးသားထားသည်မှာ
“အို – ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော် —
ကျေးဇူးတော်ဆိုတာ ကိုယ်တော်ရဲ့ မျက်ရည်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်တွေဟာ ကိုယ်တော်ရဲ့ နံဘေးတော်ကနေ သွေးများနဲ့ တစက်စက် စီးထွက်နေပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်တွေဟာ ကိုယ်တော်ရဲ့ နှုတ်ဖျားတော်ကနေ ချိုမြိန်မှုတွေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်တွေဟာ ကိုယ်တော်ရဲ့ ကျောပေါ်က ကြာပွတ်ဒါဏ်ရာတွေမှာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်ကိုယ်တော်ရဲ့ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ လည်းတွေ့နေရပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်တွေဟာ ကိုယ်တော်ရဲ့ လက်ဖ၀ါးပေါ်က သံချက်ရာ တွေမှာလည်း မြင်နေရပါတယ်။
အိုး— မြတ်သော သားတော် …ဒီနေရာတွေမှာ ကြီးမား နက်နဲလှတဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေ ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေလို့ မရနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပါ၊
ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားဘို့တောင် မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပါ။
အဲဒီကျေးဇူးတော်တွေဟာ ကောင်းကင်တမန်တွေကို အံ့သြမှု ဖြစ်စေပါတယ်။
အပြစ်သားတွေကိုတော့ ၀မ်းမြောက်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ … အစရှိသည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ပါသည်။
C. S. Lewis ကလည်း အံ့သြစရာ သူ၏ စိတ်ကူးယာဉ် ကြောင်းအရာလေးဖြင့် ရေးသား သက်သေ ထူထားသည်မှာ ငရဲပြည်မှ ခရီးသည်များကို တင်ဆောင်ကာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ခရီးစဉ်တခုအဖြစ် သွားသော ဘစ်ကားတစ်စီးပေါ်တွင် လူတစ်ဦးလိုက်ပါလာသည်။ ထိုကားသည် ကောင်းကင် နိုင်ငံတွင် ရွေများဖြင့် ခင်းထားသော လမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘတ်စ်ကားထဲမှ လူသည် ထိုရွှေလမ်းပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နေသော သူ၏ မိတ်ဆွေဟောင်း တစ်ဦးကို တွေ့လိုက်သည်။ ထိုအခါ သူသည် ရုတ်တရတ် ထကာ အားကုန် အော်ဟစ်လိုက်သည်မှာ “ဒါမတရားဘူး၊ လုံးဝမတရားဘူး၊ အဲဒီလူဟာ သူ့ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာ အပြစ်တွေနဲ့ အသက်ရှင် ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မတရားဘူး၊ ကျွန်တော် ဖြောင့်မက် မှန်ကန်မှုကို လိုချင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားအတိုင်း ဖြစ်ချင်ပါတယ်။” ဟု အသံကုန် အော်ဟစ် လိုက်သည်။ ထိုရွှေလမ်းပေါ်မှ အခြားသော လူတစ်ဦးသည် သူ့မိတ်ဆွေထံသို့ ကယ်ပြီး ပြောလိုက်သည်မှာ “ဒီလူဟာ သနားစရာဘဲ။ ငါတို့နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ ဖြောင့်မက်ခြင်း တရားကဘဲ ငါတို့ကို ဒီနေရာ ပို့ပေးလိုက်တယ် ဆိုတာ သူ မသိရှာဘဲကိုး။ ငါတို့ ဒီနေရာမှာ ရှိနေတာ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရလို့ပေါ့။”
လူအချို့က ပြောသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် ဓမ္မသစ်ကာလ အသင်းတော် ခေတ်တွင် ပိုမို တိုးတက်လာသည် ဟုပြောပါသည်။ နောက်ထပ် သေချာစွာ လေ့လာကြည့်မည် ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ကမ္ဘာဦး စတင်ကတည်းက လူသားများ အပေါ်တွင် သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ အာဒံနှင့် ဧ၀ အပြစ်တရား လုပ်ပြီး အရှက်တရားနှင့် ခံစားနေရချိန်တွင် ထိုအရှက်ကို လုံခြုံစေရန် ဖန်တီးပေးခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ၃း၂၁)။ ထိုအရာသည်ကျေးဇူးတော်ပင် ဖြစ်သည်။ ဒါဝိတ် ဘုရင်သည် ဗာသရှေဗနှင့် ပြစ်မှားပြီး နောက် သူမ၏ ယောင်္ကျားကို သတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူသည် ၀မ်းနည်း ပက်လက် ခံစားရကာ ကျေးဇူး တရားကို ရရှိရန် ဆုတောင်း၍ ခံစားရသော နှုတ်ခပတ်တော်ကို ချရေးလိုက်သည်။ ချရေး လိုက်သော အကြောင်းအရာသည် နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီသည့် တိုင်အောင် အပြစ်တရားနှင့် ပတ်သတ်သည့် သွန်သင်ချက် ဖြစ်လာသည်။ ” အို ဘုရားသခင် ကျေးဇူးပြုချင်သော စေတနာ စိတ်တော် ရှိသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်ကို သနားတော်မူပါ။ စုံမက်တော်မူခြင်း ဂရုဏာ များပြားသည်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ် ကျူးလွန်ခြင်း အပြစ် ဖြေတော်မူပါ။ ဒုစရိုက် အညစ်အကြေးကို အကုန်အစဉ် ဆေးကြော၍ အကျွန်ုပ်ကို သန့်ရှင်း စေတော်မူပါ” (ဆာလံ ၅၁း၁-၂)။ ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိတ်၏ အပြစ်ကို ဖြေလွှတ်ပေး လိုက်သည်။ ထိုအရာသည် ကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတော်အကြောင်း (၂)ကို ဆက်ဖတ်ပါ။